IPlurro izisa isixa semali esiyiCash kwishishini lakho lokuThengisa | Martech Zone
IPlurro izisa isixa semali esiyiCash kwishishini lakho lokuThengisa
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 11, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 11, 2013 Douglas Karr
Kubekho imingxunya enzulu efumanekayo kwishishini lesaphulelo seqela elingoyiswanga okwangoku. Izikhalazo ezivela kumashishini asebenzisa iGroupon kunye ne-LivingSocial zikhombe kwimicimbi eliqela:
Izaphulelo ezifunekayo zinyukile kangangokuba zonakalisa amashishini.
Intlawulo kwisaphulelo ayizi kwangoko, ibangela imiba yokungena nokuphuma kwemali engcwabeni amanye amashishini.
Abathengi abatsalayo bakhutshelwe okhethekileyo kuphela kwaye abaze babuye.
Iinkampani zizama ngamandla ukuthengisa amashishini ngalo lonke ixesha.
IPlurro Utyibilikise imodeli yesaphulelo kwiqela. Okokuqala, ngabasebenzisi abaqhuba ifayile ye- isixa semali. Nje ukuba abahlobo bakho babhalise ukuya kwindawo okanye kwindawo yokuthengisa, uPlurro unxibelelana neshishini ukuba loluphi uhlobo lwesaphulelo abanokusinika. IPlurro Cash Mob iyabonakala kwaye kufuneka ibonise itikiti labo lokuhamba kwaye bafake imali yokwamkela ukuze bafumane isaphulelo. Oku kungqinisiswa ngumnini shishini.
Onke amatikiti adityaniswe yiPlurro kwaye ishishini lihlawula umrhumo we-5% kwiPlurro yeshishini. Sisisombululo esihle kwaye woyisa imicimbi nganye engentla. Okokuqala, ishishini linokuthatha inxaxheba ukuba bafuna ukuseta isaphulelo ngokwabo. Emva koko, bahlawulwa ngaphambili kwaye emva koko bahlawule iPlurro. Eyona nto ibaluleke kakhulu, kuba izihlobo ezisebenzisa le nkqubo… ingako ngendawo kwaye ube nexesha elimnandi njengoko kunjalo ngesaphulelo. Okokugqibela, esona sizathu sokuba uPlurro abize umnxeba kukuba kungenxa yokuba sele kukho isixa semali esilindileyo!
Nalu ushwankathelo lwePlurro:
I-Plurro idityaniswe ne-Facebook kwaye ikuvumela ngeendlela ezahlukeneyo zokucwangcisa nokumema abahlobo bakho kwimali yakho elandelayo yemali.
I-Plurro isungulwe eMantla eVirginia kwaye ngoku iyasungula e-Indianapolis. Siza kuyivavanya-sisizathu esihle sokubuyisa imeko yentlalo kwindlela yethu apha ekuhlaleni! Khuphela Plurro kwi-iPhone yakho -I-Android iyeza.
tags: isixa semaliiqela isaphuleloiqelaezentlaloiplurro
Ukuthengisa umxholo kwiNtlalontle, kwiHlabathi leSelfowuni